HASL နှင့် HASL ခဲ-အခမဲ့အကြားခြားနားချက် - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2018-08-13 hits:
PCB ပျဉ်ပြား၏မျက်နှာပြင်ကုသမှုများအတွက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်စဉ်များတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်: HASL, လည်းခေါ် "ပူပြင်းတဲ့လေထု level", pcb circuit ကိုပျဉ်ပြားများထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရာဖြစ်ပါသည်. pcb ဆားကစ်ဘုတ်၏အဓိကဂဟေခဲ-အခမဲ့ HASL ဖြစ်ပါသည်. ခဲ-မှုန်ရေမွှားဖြူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်, အရာကိုလည်းအများအားအသုံးပြုကြသည်. သူတို့ကကျယ်ပြန့်ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူအတွက်အသုံးပြုကြသည်. မှုန်ရေမွှားဖြူ၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်နောက်ဆက်တွဲဖောက်သည်များ၏အရည်အသွေးအပေါ်သက်ရောက်မှု \_ '' ဂဟေ, ဒါကြောင့်သံဖြူဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၏အာရုံဖြစ်လာသည်ကိုလေပေါ်မှာပ. , အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော pcb မှုန်ရေမွှားဖြူအမျိုးအစား၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်အခြေခံအသိပညာမိတ်ဆက်.
1.PCB မျက်နှာပြင်ကုသမှုမှုန်ရေမွှားဖြူ features တွေ:
PCB ဆားကစ်ဘုတ်များတွင်သံဖြူပက်ဖြန်းအများဆုံးအသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်. ဖြစ်စဉ်ကိုဒီမျိုးကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကောင်းသောဂဟေစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်, ကောင်းသော Anti-ဓာတ်တိုးအကျိုးသက်ရောက်မှု, နှင့်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်တတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်. PCB ဆားကစ်ဘုတ်ထဲမှာခဲခြင်းနှင့်ခဲ-အခမဲ့ဘာသာဂုဏ်ထူးနှစ်မျိုးလည်းရှိပါတယ်:
ပဌမ, ခဲ-အခမဲ့ HASL. ခဲ-အခမဲ့ HASL တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရန်အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစဒီအဆင့်မှာထောက်ခံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. ခဲ-အခမဲ့ဖြူအတွက်ဦးဆောင်အကြောင်းအရာထက် ပို. မဟုတျပါဘူး 0.5, နှင့်ဦးဆောင်-အခမဲ့ HASL မြင့်မားသောအရည်ပျော်မှတ်ရှိပါတယ်, အဆိုပါဂဟေဆက်ပူးတွဲကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်. အနှစ်သာရထဲမှာ, ခဲမှုန်ရေမွှားသွပ်နှင့်ခဲ-အခမဲ့ဖြူမှုန်ရေမွှားလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ. ခဲကိုသာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကွဲပြားခြားနားသည်. ခဲ-အခမဲ့ဖြူလူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထက်ပိုသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေများနှင့်ဘေးကင်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့ကိုလည်းအနာဂတ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာသင်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်. ဖြစ်စဉ်ကို hasl နှင့်ခဲ-အခမဲ့ hasl ၏နှစ်မျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ချို့ယွင်းချက်မိတ်ဆက်ကြသည်. သူတို့ထဲတွင်, hasl သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်မလုံခြုံဖြစ်ပါသည်, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်. ထိုကွောငျ့, ကခဲ-အခမဲ့ hasl သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်, Non-အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်, ထို့အပြင်လက်ရှိထောက်ခံမျက်နှာပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်.
ဒုတိယ, HASL ။ ဒါခေါ်ခဲ-ပက်ဖြန်းဖြူဖြူတစ်ဦးအခြို့သောအချိုးအစားနှင့်အညီပြင်ဆင်သည်ဟုဆိုလိုသည်. ခဲဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းဖြူဝါယာကြိုးများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်. ခဲ-ဖြူဝါယာကြိုးခဲ-အခမဲ့ဖြူဝါယာကြိုးထက် သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းသည်နှင့်ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့ပါသည်. ခဲလူသားအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်; ခဲ eutectic အပူချိန်ခဲ-အခမဲ့ထက်နိမ့်ဖြစ်ပါတယ်. အထူးသ, ထိုသို့ခဲ-အခမဲ့အလွိုင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မူတည်. SNAGCU ကဲ့သို့ eutectic ဖြစ်ပါသည် 217 degrees, နှင့်ဂဟေအပူချိန် eutectic အပူချိန်ပေါင်းဖြစ်ပါသည် 30 သိ�ဒီဂရီ degrees. ဒါဟာအမှန်တကယ်ညှိနှိုင်းမှုအပေါ်မူတည်. အဆိုပါခဲ eutectic ဖြစ်ပါသည် 183 degrees. စက်မှုခွန်အား၌ဦးဆောင်, အရောင်အဝါ, စသည်တို့ကို. ခဲ-အခမဲ့ထက် သာ. ကောင်း၏. Therefore, ကခဲမဖြူရှိသည်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတမဖြစ်, နှင့်ကမထိုကွောငျ့တို့ကထောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့အခြို့သောကွာဟမှုရှိ. Therefore, ခဲ-အခမဲ့မှုန်ရေမွှားဖြူမွေးဖွားခဲ့သည်.
ဒါကြောင့်ခဲနှင့်ဦးဆောင်-အခမဲ့မျက်နှာပြင်ကုသမှုအကြားခွဲခြားဖို့ဘယ်လို, ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ညင်သာစွာ pad ပါသုတ်ဖို့အဖြူရောင်စာရွက်တစ်ရွက်ယူ, အဆိုပါသံဖြူ၏ရပ်တည်ချက်ကို, ကအနက်ရောင်ပါလျှင်, ခဲမှုန်ရေမွှားမဖြူလည်းမရှိ, အဘယ်သူမျှမအနက်ရောင်အဘယ်သူမျှမခဲမှုန်ရေမွှားဖြူဖြစ်ပါသည်.